Dunidu xagee u socotaa? – Webinar. – JucelinoLuz
Waxaan rajaynaynaa inaad xaalad wanaagsan ku sugan tahay bilawga gu’ga inkasta oo saddexdan bilood ee ugu horreeya sanadka 2022 ay ahaayeen kuwo aad ugu baahi qabay adduunka. Dagaalka Ukrain waa mid ka cadhaysiinaya oo saamaynaya qayb weyn oo ka mid ah dadka dhulka deggan kuwaas oo ka baqaya inuu u sii socdo dagaalka saddexaad ee adduunka. Haddana waxaa yimid burburkii dhaqaale ee nasiib darro billowday bishii Maarso, sida uu Jucelino ku dhawaaqay. Waligeed ma dhicin in saadaasha doorashada madaxtinimo ay aad u sarreyso dalka Faransiiska, shidaalkuna waxa uu gaadhay heer aan hore loo arag gobolo badan oo caalamka ah. Xogta ayaa wareegta oo dib u soo celisa waxa khaldan waxayna dhalinaysaa su’aalo iyo cabsi badan oo guryaha soo gala. Laakin halkee u soconaa? yaab aduunka.
Adiga oo raacaya saadaasha Jucelino waxaad ogaataa in wakhtigan ay ka buuxaan dhacdooyin isbedal iyo caqabado leh, laakiin aan lagu qorin dhagax, sababtoo ah tamarta ayaa si dhakhso ah u socota hadda. Tani waa sababta ay muhiim noogu ahayd inaan ku siino webinar cusub si aad u hesho “war cusub” oo uu ka soo celiyay habeennimadiisa marka uu soo booqdo mustaqbalka Dhulka.
Xitaa haddii uu arkay oo uu sii wado inuu arko dhacdooyin cusub oo soo bixi kara, Jucelino wuu ogyahay in aysan jirin wax la hubo oo rajada iyo iimaanku waa laba xulafo oo muhiim ah oo la socday 52 sano oo saadaalin ah.
Webinar-kan ma jiro si uu u abuuro cabsi dheeraad ah, laakiin wax badan oo dheeraad ah si loo bixiyo aqoonta si loo sii saadaaliyo oo loogu diyaargaroobo si ay u awoodaan inay u dhaqmaan kor u kaca oo ay helaan amniga gudaha.
In ka badan weligii, kooxaha salaadda, kulannada halkaas oo jacaylku ku faafo iyo isu imaatinka nafaha quruxda badan ee isu yimaada si ay u fikiraan ayaa gacan ka geysanaya beddelka jadwalka. Hadii aad hore ugu diwaan gasheen bahda salaada JDL, aynu ku midowno quluubtayada maalinta jimcaha ee 1-da April si aynu u iftiimino dhimbilaha jacaylka ee aynu gudaheena ku dhex qaadno fallaadhahana ku faafino aduunka cabsida leh. Oo haddii aanad weli is diiwaan gelin oo qalbigaagu ku soo wacayo, iska diwaangeli goobadaan salaadaha iftiinka.
Jacaylku wuxuu jabiyaa cabsida.